रिनाको मृत्यु माथिबाट खसेर नै भएकाे प्रहरी निष्कर्ष
रिनाको मृत्यु माथिबाट खसेर नै भएकाे प्रहरी निष्कर्ष बलात्कारकाे कुनै संकेत देखिएन : प्रहरी
प्रह्लाद गुरागाईं बुधबार, १ जेठ २०७६
विराटनगर : मोरङको पथरीमा एक महिनाअघि मृत अवस्थामा फेला परेकी रिना बस्नेत (रूपा) को मृत्यु माथिबाट खसेर नै भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विभिन्न अड्कल र अनुमानका बीच मृत्युको विषयलाई लिएर विभिन्न अभिव्यक्ति आए पनि प्रहरी रिनाको मृत्यु माथिबाट खसेर नै भएको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको पोष्टमार्टमको अन्तिम रिपोर्टमा समेत उनको मृत्यु छाती र टाउकोको भित्री भागको मुख्य अंगमा लागेको चोटका कारण भएको उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता एवं डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले आजको न्युजसँग भने, ‘उनको मृत्यु माथिबाट झरेर नै भएको हो । फरेन्सिक रिपोर्टले पनि त्यसैलाई संकेत गर्छ ।’ नग्न अवस्थामा सडकमा फेला परेको शवलाई प्रहरीले सोही दिन बिहानै पोष्टमार्टमका लागि धरान लगेको थियो ।
पथरीमा डेरामा बस्दै आएकी रिना आफ्नै घरअगाडिको सडकमा मृत फेला परेकी थिइन् । घरको तेस्रो तल्लामा दुइटा कोठा भाडा लिएर उनी र उनका छोरा बस्दै आएका थिए । धरानको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा उनको रगत, विष, मदिरा लगायतका चिज सेवन गरे–नगरेको र उनको शरीरमा लागेको चोटको परीक्षण गरिएको थियो ।
प्रहरीले उनको शरीरको दाहिने भागको करङ भाँच्चिएको, छातीको देब्रे भागमै गम्भीर चोट लागेको र शरीरको दाहिने भागमै चोट लागेर अत्यधिक रक्तश्राव भएको जनाएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्यत्रबाट हत्या गरेर त्यहाँ लगेर नफालिएको, उनीसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू सो घरमा प्रवेश नगरेको तथा खोलिएको कपडाको प्रकृति पनि शंकास्पद नदेखिएको र बलात्कार पनि नभएको बताए । उनले भने, ‘उनले लगाएको कपडा कि आफैँ खोलेको हो वा कि सहमतिमा अरु कसैले खोलेको हो । तर जबरजस्ती गरेको भने होइन ।’
यस्तो थियो घटनास्थलको प्रकृति
विभिन्न कोणबाट सूक्ष्मरूपले अनुसन्धान गरेको प्रहरीले घटनास्थलको प्रकृतिको विषयमा समेत प्रष्ट पारेको छ । प्रहरीका अनुसार उनले भाडामा लिएको एक कोठामा आफू र छोरा सुत्ने गरेको तथा अर्को कोठालाई भान्साको रूपमा प्रयोग गरेको जनाएको छ ।
भान्सामा समेत सुत्नका लागि एउटा बिछ्यौना थियो । सो भान्सामा एउटा बियरको बोतल र एउटा ग्लास रहेको प्रहरीको भनाइ छ । भान्सा कोठाभित्र यत्रतत्र पराग र गुट्काका खोल समेत भेटिएको थियो ।
सडक छेउमा रहेको शौचालयमा पखाल्न बाँकी जुठा भाँडा र भातका सिताहरू छरपष्ट रूपमा भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सो घरको तेस्रो तल्लाको छेउमा रहेको शौचालयबाटै प्रष्टरूपमा सडक देखिने र त्यसलाई सुरक्षित गर्न करिब तीन फिट जतिको पर्खालको लगाइएको छ । शौचालयदेखि करिब छ फिटको दूरीमा रिनाले प्रयोग गरेको भित्री लुगाहरू खोलेर राखेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
डिएसपी श्रेष्ठले भने, ‘घटनास्थलमा प्रहरीले जुन अवस्थामा लुगा फेला पारेको थियो, त्यही अवस्थामा अहिले पनि हामीले सुरक्षित रूपले राखेका छौँ ।’
तीन जनाको पोलोग्राफ, ५० भन्दा बढी सोधपुछ
रिना बस्नेतको रहस्यमय मृत्युको विषयलाई लिएर प्रहरीले ५० जनाभन्दा बढीसँग सोधपुछ र प्रारम्भिक बयान लिएको थियो । प्रहरीले उनीसँग निकट रहेका कमल नेपाल, उनकी पत्नी मनिता नेपाल र सो घरको तेस्रो तल्लामै डेरा गरी बस्ने मदन गुरागाईंलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले तीनै जनासँग पोलोग्राफ परीक्षण गरेको थियो । उनीहरूले बयान क्रममा नढाँटेको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले रिनासँग निकट साथीदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट उनीसँग निकट रहेकाहरूलाई सोधपुछ गरेको थियो । डिएसपी श्रेष्ठले यो घटनासँग सरोकार राख्नेहरूबाट गरेको अनुसन्धानमा हत्या गरेको आधार नभेटिएको जानकारी दिए ।
रिनाको मृत्युको विषयलाई लिएर आन्दोलित स्थानीयवासीले उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुन सक्ने आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्थानीयबासीले संघर्ष समिति नै गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रशासनलाई दबाब दिएका थिए । रिना बस्नेतको रहस्यमय मृत्यु प्रकरण प्रदेश १ को कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले अनुसन्धानका लागि टोली खटाएको थियो ।
‘गिफ्ट’ को लोभ देखाउँदै बालिकामाथि बलात्कार
‘गिफ्ट’ को लोभ देखाउँदै बालिका बलात्कार
'पुस्तक दिनुहोस्, सदस्य बन्नुहोस् '
मन्त्रीज्यू ! काेइरालालाई कहिले खुवाउने मिठाई ?
सिके राउतको परिषद् बैठकमा नागरिकता अनिवार्य
बंगलादेशलाई हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा
विप्लव समूह अनधिकृत झुण्ड : प्रधानमन्त्री
सेमिफाइनलमा नेपालले श्रीलंकाको सामना गर्ने